Suldaan Nuur Axmed Amaan رحمه الله (naanaysta Soomaaliga ah ee Nuur Dheere (1841–1907), – Kaydka Xogaha Dahsoon Iyo Xaqiiqooyinka Foolaad.com
HomeSOOYAALSuldaan Nuur Axmed Amaan رحمه الله (naanaysta Soomaaliga ah ee Nuur Dheere (1841–1907),
Suldaan nuur Amaan aas aasihi Daraawishta
Suldaan Nuur Axmed Amaan رحمه الله (naanaysta Soomaaliga ah ee Nuur Dheere (1841–1907), wuxuu ahaa suldaanka guud ee qabiilka Habar Yoonis 1880 – 1899 markii dambena wuxuu ka mid ahaa hoggaamiyeyaashii ka dambeeyay dhaqdhaqaaqii Somali Dervish iyo kacdoonkii (1899-1919). Wuxuu ahaa garyaqaanka guud ee isu keenaya taageerayaasha Kob Fardod Tariqa oo ka dambeeyay ololihiisii ​​ka dhanka ahaa Faransiiska ee Roman Catholic Mission oo sabab u noqon lahaa kacdoonkii Dervish, wuxuu gacan ka gaystay isu soo dhaweynta ragga iyo hubka wuxuuna marti galiyay qabiilooyinka kacdoonka ka wada xaafadiisa Burco. Agoosto 1899, wuxuu ku dhawaaqay jabhaddii Dervish.Wuxuu la dagaallamayay oo uu hoggaaminayay dagaalka sannadihii oo dhan 1899 – 1990. Isaga iyo walaalkiis Geleh Axmed oo loo yaqaan (Kila Ahmed) waxay ahaayeen saxiixayaashii ugu weynaa ee heshiiskii nabadeed ee Dervish ee lala galay Ingiriiska, Itoobiya iyo Talyaaniga. Suldan Nuur wuxuu ku xareysanyahay mowjado cadaan ah oo ku yaal Taleex, oo ah meesha ugu weyn ee Dervish-ka isla markaana ah caasimada Dervish ilaa 19-kii. 12, markhaati u ah kaalintiisa ku aaddan abuuritaanka dhaqdhaqaaqa. Wuxuu dhintay qiyaastii 1907.waxa kale oo aan halkan idiin soo bandhigi cadayn waraaqihii ugu goodiyay ingiriis markuu Suldan Amaan taageeray Daraawishtii waxanay u dhigantay sidan.Waa warbixin uu diray J. Hayes Sadler. Wuxu kaga hadlayaa dhacdo xiisa badan. Soo ifbixidii dhaqdhaqaaqii Daraawiishta dadka u guuxay ee taageeray waxa kamid ahaa Suldaan Nuur Ammaan, suldaankii Habar Yoonis (Garxajis)Suldaanka sidaynu sheegnay wuxu ahaa Soomaalida gobta ah ee diidanayd gumeystaha cad ee dhulkooda ka arimiya, kuu doono ganaaxi kara, kuu doonana gaajaysiin kara.
Haddaba markan ninkaas J. Hayes Sadler la dhaho oo og mawqifka Suldaanka wuxu waraaq u diray suldaanka wuxuna ku yiri amar iigu kaalay meesha aan ku nasanayo ee ku taala nawaaxiga Hargaysa si aan arimo gaar ah kaagala hadlo. Suldaanka oo edebdarrada ninka cad iyo kibirkiisa ka dhirfay baa amar ku bixiyay ninkii waraaqda siday in hubka laga dhigo dirayska xun ee gaalku ku jufayna laga bixiyo.
Waraaqdan waxa ka buuxa cadhadii ninkaas oo leh ninkaas shaqaan ka qabanayaa, waanna gaajaysiinayaa (yacnii waxan ka xidhayaa badda waxa uga soo degaya oo dhan). Waa arin ay ilaa hadda isticmaalaan quwadaha kibirsani. Waxaas oo dhan waxa ka daran sida uu ugu ciil baxayo inuu suldaanka caayo, kuye waa nin doqona oo wadaadku intuu amaanay buu kala badbatay.